Bale; “Haddii aan ahaan lahaa qofka bixinaya abaalmarinta Kubadda Dahabka waxaan sanadkan siin lahaa… – Gool FM
Bale; “Haddii aan ahaan lahaa qofka bixinaya abaalmarinta Kubadda Dahabka waxaan sanadkan siin lahaa…
(Madrid), 31 Okt 2016 –Xidigga kooxda Real Madrid ee Waddanka Spain, Gareth Bale inuu ku guuleysto Kubadda Dahabka (Ballon d’Or) waxay kaga dhigan tahay Riyo oo kale, laakiin way adag tahay inuu dhaafo saaxiibkiisa ay isku kooxda yihiin ee Cristiano Ronaldo.
Bale oo ka hadlayay Shirkii jaraa’id ee uu galabta sida rasmiga ah ugu saxiixay qandaraaskiisa cusub ee lixda sanadood ee soo socota illaa 2022 uu kula sii joogayo Real ayaa waxa uu kaga hadlay Abaalmarinta FIFA Ballon d’Or.
“Arrinta ugu muhiimsan waa inaan ku guuleystaa Koobabka suurtogalka ah, sababtaa awgeed ayaana u dheereyay heshiiskayga Real Madrid, maxaa yeelay waxaan aaminsanahay inaan in badan ku guuleysan karno” ayuu yiri Laacibka Walesh, Bale.
“Ma garanayo goorta aan ku guuleysan doono Kubadda Dahabka, laakiin weligay iima ahayn Yoolkeyga shaqsi ahaaneed, mar walba waxaan arrintan ka eegi jiray haddii aan guuleysto oo si fiican u ciyaaro, kaddib abaalmarinnada shaqsi ahaaneed way iska imaan doonaan” ayuu raaciyay Bale.
Inkastoo Bale uu sanadkan ku guuleystay Champions League, xulka Wales-na soo gaarsiiyay Nus dhammaadkii Euro 2016 haddana waxa uu caddeeyay in Cristiano Ronaldo uu u qalmo abaalgudkaan.
“Haddii aan ahaan lahaa qofka bixinaya abaalmarinta Kubadda Dahabka, waxaan oran lahaa Ronaldo xilli ciyaareedkiisan wuxuu ahaa mid aan la rumeysan karin, sanadkiisan wuxuu ahaa mid cajiib ah waayo wuxuu ku guuleystay Champions League iyo Euro 2016” ayuu warbaahinta u sheegay Bale.
Muxuu ka yiri Guardiola kulanka habeen dambe ay marti qaadi doonaan kooxda Barcelona?